Vaovao - Fantatrao ve ny momba ny tadin'ny Patch Conditioning Mode?
Telefaonina: 0086 - 18675512053
Tady Patch Fiber Optic
Fibre Cable Adapter
Tady Patch Fibre Optic mifono vy
Fantatrao ve ny momba ny tadin'ny Patch Conditioning Mode?
Ny fangatahana lehibe amin'ny fampitomboana ny bandwidth dia nahatonga ny famoahana ny fenitra 802.3z (IEEE) ho an'ny Gigabit Ethernet amin'ny fibre optika. Araka ny fantatsika rehetra, 1000BASE-LX transceiver modules dia tsy afaka miasa afa-tsy amin'ny fibre tokana. Na izany aza, mety hiteraka olana izany raha mampiasa fibre multimode ny tambajotra fibre efa misy. Rehefa atomboka amin'ny fibre multimode ny fibre maody tokana dia hiseho ny tranga iray antsoina hoe Differential Mode Delay (DMD). Ity vokatra ity dia mety hiteraka famantarana marobe izay mety hanakorontana ny mpandray sy hamokatra fahadisoana. Mba hamahana an'io olana io dia ilaina ny tady patch mode conditioning. Ato amin'ity lahatsoratra ity, ny fahalalana sasany tady tady fampandrenesana mode haseho.
Inona no atao hoe tady Patch Conditioning Mode?
Ny tadin'ny fametahana maody dia tady multimode duplex izay manana fibre tokana tokana amin'ny fiandohan'ny halavan'ny fampitana. Ny fitsipika fototra ao ambadiky ny tady dia ny fandefasanao ny laser anao amin'ny ampahany kely amin'ny fibre mode tokana, avy eo ny faran'ny fibra tokana tokana dia atambatra amin'ny fizarana multimode amin'ny tariby miaraka amin'ny offset fototra avy eo afovoan'ny multimode. fibre.
Araka ny aseho eo amin'ny sary
Ity teboka offset ity dia mamorona fandefasana izay mitovy amin'ny fandefasana LED multimode mahazatra. Amin'ny alàlan'ny fampiasana offset eo anelanelan'ny fibre mody tokana sy ny fibre multimode, ny tadin'ny patch conditioner mode dia manafoana ny DMD ary ireo famantarana marobe izay mamela ny fampiasana 1000BASE-LX amin'ireo rafitra tariby fibre multimode efa misy. Noho izany, ireo tadin'ny fametahana fametahana maody ireo dia ahafahan'ny mpanjifa manatsara ny teknolojian'ny hardware nefa tsy misy fanavaozana lafo ny orinasa fibre.
Soso-kevitra sasany Rehefa Mampiasa Tady Patch Conditioning Mode
Rehefa avy nianatra momba ny fahalalana sasany momba ny tadin'ny tady fametahana mode ianao, saingy fantatrao ve ny fampiasana azy? Avy eo dia aseho ny toro-hevitra sasantsasany rehefa mampiasa cable conditioning mode.
Matetika ampiasaina tsiroaroa ny tadin'ny tady fametahana maody. Midika izany fa mila tady tady fampandrenesana mode ianao isaky ny farany hampifandraisana ny fitaovana amin'ny orinasa tariby. Noho izany, matetika ireo tadin'ny patch ireo dia voafantina amin'ny isa. Mety ho hitanao fa misy olona manafatra tady patch iray fotsiny, dia matetika izy io no tazonin'izy ireo ho tahiry.
Raha manana connecteur SC na LC ny module transceiver 1000BASE-LX anao, azafady mba ataovy izay hampifandray ny tongotra mavo (mode tokana) amin'ny tariby amin'ny lafiny fandefasana, ary ny tongotra volomboasary (multimode) amin'ny lafiny fandraisana ny fitaovana. . Ny fifandimbiasana ny fampitana sy ny fandraisana dia tsy azo atao afa-tsy eo amin'ny lafiny orinasa cable.
Ny tadin'ny patch conditioner dia tsy afaka mamadika fomba tokana ho multimode ihany. Raha te hamadika multimode ho fomba tokana ianao, dia ilaina ny mpanova media.
Ankoatr'izay, ny tariby fametahana fametahana maoderina dia ampiasaina amin'ny varavarankely 1300nm na 1310nm optika, ary tsy tokony ampiasaina amin'ny varavarankely lava lava lava 850nm toy ny 1000Base-SX.
Avy amin'ny lahatsoratra dia fantatsika fa ny tadin'ny patch conditioner dia tena manatsara ny kalitaon'ny famantarana ny angona ary mampitombo ny halaviran'ny fampitana. Saingy amin'ny fampiasana azy dia misy ihany koa ny toro-hevitra tokony hotadidina. Ny RAISEFIBER dia manolotra tady fametahana fametahana amin'ny karazana sy fitambaran'ny SC, ST, MT-RJ ary LC fibre optic connectors. Ny tadin'ny raisefiber famerana mari-pamantarana rehetra dia manana kalitao avo lenta sy vidiny ambany.
Adiresy: 4F, ​​HeShengWenChuang Garden, Hebei Industrial district, Dalang Town, Dalang South Rd Long Hua District, Shenzhen city, PRC
© Copyright - 2021 : Zo rehetra voatokana.